पछाडि दुखाइ राहत आहार सल्लाहहरू
समय: 2019-10-25 दृश्य:
धेरै व्यक्तिहरूले तपाईले गर्न सक्ने चीजहरू महसुस गर्छन् वा नगर्नुहोस् रोक्न मद्दत गर्न सक्छ हर्नियटेड डिस्क पीठमा दुखाइ. बानीहरू जस्तै तपाईको पछाडि बलियो बनाउन व्यायाम गर्नुहोस् (राम्रो) वा सहि प्रविधि बिना भारी वजन उठाउँदै (नराम्रो) कमर दुख्नेबाट बच्न र समस्या आयो भने तुरुन्तै निको हुनमा ठूलो असर पार्दछ. तर धेरै व्यक्तिहरूले तपाईले के खान्छन् भनेर महसुस गर्दैनन् (वा नखाऊ) तपाइँको पछाडि स्वस्थ राख्न मद्दत गर्न सक्छ, तपाईलाई हर्निटेड डिस्कको विकास गर्ने सम्भावना कम छ. त्यो सहि छ, स्वस्थ, गैर-भडकाउने आहारले तपाईंको पछाडि दुखाइमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ र यसलाई रोक्न मद्दत गर्दछ. तपाइँको जीवनबाट पछाडि दुखाइ राख्नको लागि तपाइँले के खानुपर्दछ र के खानु हुँदैन भन्ने कुरा यहाँ छ.
तपाईको मेरुदण्डले तपाईको शरीरलाई समर्थन गर्नुपर्दछ, त्यसैले तपाईंको हड्डी र मांसपेशीमा उचित पोषण हुनुपर्दछ र सूजनबाट जोगिनु पर्छ. Inflammation (swelling) पछाडि दुखाइको लागि स�सूजन�य कारण र योगदान कारक हो. Inflammation, जुन स्थानीयकृत वा सजिलैसँग देखिने छैन, मांसपेशिहरु र मेरुदण्ड जोड्ने को स्वतन्त्र आन्दोलन सीमित गर्दछ (कशेरुका).
के तपाइँ कहिल्यै सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ दिनहुँ के गर्दै हुनुहुन्छ जुन तपाइँको पछाडि दुखाइ अझ राम्रो बनाउन सक्छ? राम्रो, हामीले थाहा पायौ कि यो सामान्य प्रश्न हो त्यसैले हामीले आफ्नो शीर्ष दिने निर्णय गर्यौं 10 फिर्ता को लागी पछाडिको सल्लाह! केवल आफैंलाई समात्न तल क्लिक गर्नुहोस्!
कम आहारले शरीर भित्र जीर्ण सूजन लाई बढावा दिन सक्छ. पछाडि दुखाई बाहेक, पुरानो ईन्फ्लेमेसनले जीवनको लागि जोखिमपूर्ण अवस्थालाई जस्तै हृदय रोग लिन सक्छ, मधुमेह र अधिक. राम्रो समाचार छ, तपाईं कम गर्न र सूजन रोक्न खान सक्नुहुन्छ। तपाइँको खाने योजना तपाइँको पौष्टिक आवश्यकता र तपाइँको हुन सक्छ कुनै पनि स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न को लागी काम गर्दछ सुनिश्चित गर्न आफ्नो चिकित्सक संग उचित आहार छलफल गर्न नबिर्सनुहोस्।.
एक जस्तै एक प्राकृतिक आहार अनुसरण गर्दै भूमध्य क्षेत्र संग सम्बन्धित तपाईं ईन्फ्लेमेन्ट पैदा गर्ने खाद्य पदार्थ लाई हटाउन र विरोधी भडकाउने खाना को खपत बढाउन मद्दत गर्न सक्छ. केही फरक पर्दैन तपाईले यसलाई के भन्ने, एन्टीआक्सीडेंट युक्त खानामा केन्द्रित खाने बानी, सम्पूर्ण अन्नहरू र दुब्ला प्रोटिनको साथ स्वस्थ बोसोले शरीरलाई बलियो राखेर हर्निटेड डिस्कको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ. पछाडि स्वस्थ आहार सल्लाहहरू:
तरकारीमा तपाईंको आहार फोकस गर्नुहोस्, सम्पूर्ण अन्न खानेकुरा, फलफूल, सिमी, फल, पागल, जडिबुटी, मसला र जैतुनको तेल.
ओमेगा3मा धनी माछाको-औन्स सर्विंग्स खान्नुहोस् (टुना र सामन जस्तै),2वा3साप्ताहिक पटक.
कुखुरा समावेश गर्नुहोस् (छालाविना, 3-4 औंस भाग) र अण्डाहरूको बारेमा3हप्तामा / हरेक अन्य दिनमा पटक. आधा समयको बारेमा अण्डा छोड्नुहोस्.
रातो मासुको भाँडा र मीठा खानाहरू प्रति हप्ताको एक पटक वा कममा सीमित गर्नुहोस्.
एक गिलास पिए (4 औन्स) रातो वाइन हरेक दिन वा हरेक दिन), तपाईको डाक्टरले अनुमोदन गरेको हुन्छ.
पर्याप्त क्याल्सियम पाउनुहोस्: राम्रो खाना स्रोतहरू क्याल्शियम-सुदृढ छन् (फ्याट-फ्रि) दूध र दुग्ध उत्पादनहरू, सोया दूध, क्याल्सियम-सुदृढ सुन्तला को रस र सम्पूर्ण अनाज रोटी. आवश्यकता अनुसार क्याल्सियम पूरक, तर यो भन्दा बढी 600 एक पटक मा मिलीग्राम - अधिकतम तपाइँको शरीर एक समय मा अवशोषित गर्न सक्नुहुन्छ. भिटामिन डी क्याल्शियम शोषणको लागि मद्दत गर्दछ, त्यसैले एक पूरक समावेश, हामी मध्ये धेरै जसो हाम्रो दैनिक जीवनमा पर्याप्त पाउँदैनौं.
दिनभरि धेरै पानी पिउनुहोस्. सबै शरीर प्रकार्यहरू मद्दत गर्न तपाईलाई राम्रोसँग हाइड्रेट गरिएको हुनुपर्दछ, तपाइँको मेरुदण्डको डिस्क भित्र cushioning सहित. पिउने पानीले सबै डिस्क समस्याहरूलाई रोक्न सक्दैन किनभने बुढ्यौली जस्ता कारकहरूले डिस्कहरूमा केही कुशिनलाई मेटाउन सक्छ. तथापि, शरीरको उचित हाइड्रेसन एकदम महत्त्वपूर्ण छ.
सुगारी, प्रशोधित खाद्य पदार्थ, पेय वा स्नैक्स र बेवास्ता थप्दै खाना / पेयमा चिनी
आंशिक रूपमा हाइड्रोजनेटेड तेल—प्याकेजि onमा खाद्य घटक सूचीहरू जाँच गर्नुहोस्
सेतो रोटी, सेतो चामल, सेतो पास्ता
सम्पूर्ण बोसो दुध, सम्पूर्ण बोसोयुक्त दुग्ध उत्पादनहरू
यो बुझ्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ कि पोषक तत्वहरू सँधै मिलेर काम गर्दछन्. त्यसैले, तपाइँको समग्र पौष्टिक सेवनमा ध्यान दिन निश्चित हुनुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ विभिन्न स्वास्थ्यवर्धक खानाहरू खाँदै हुनुहुन्छ. व्यक्तिले पनि कुनै पनि कमजोरी को क्षेत्रहरू भर्न पूरक गर्न सक्नुहुन्छ.
पूरक भिटामिन, खनिज, एमिनो एसिडहरू, र फ्याट्टी एसिडहरू तपाईलाई आफ्नो शरीरको सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्न सहयोग गर्ने माध्यम हो. यसले चोटपटक पछि वृद्धि र मर्मत समावेश गर्दछ. यो मेटाबोलिक कार्य राम्रो महसुस गर्न को लागी पनि हो, साहसिलो होऊ, र राम्रो बस्न.
अघिल्लोमेडोनकेयरले पुरुषको स्वास्थ्य the औ on मा पुरुषको स्वास्थ्य दिवसलाई मद्दत गर्दछ"
अर्कोएक विस्तारित प्रोस्टेट को लागी आहार सल्लाह